အပတ်စဉ် Forex သုံးသပ်ချက်
ဒီတစ်ပတ် ဘယ်လိုဖြစ်ရပ်များက ဈေးကွက်ကို လှုပ်ခတ်စေမလဲဆိုတာ သိချင်ပါသလား? နည်းပညာစုစည်းမှုများကို စိတ်ဝင်စားပါသလား? သင့်အတွက် USD, EUR, GBP, oil, gold နှင့်များစွာအပေါ် မြင့်မားသည့်-အရည်အသွေး သုံးသပ်ချက်တစ်ခု ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
usd gbp eur nzd cad aud
14.01.2019 09:21 အပတ်စဉ် Forex သုံးသပ်ချက်: ဇန်နဝါရီ ၁၄-၁၈
အပတ်တိုင်းသည် အရေးကြီးစီးပွားရေးအချက်အလက်နှင့် ဈေးကွက်ကို အတော်သက်ရောက်သည့် သတင်းများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။
usd gbp eur forex signals cad စီးပွားရေး ပြက္ခဒိန်
28.12.2018 09:43 အပတ်စဉ် Forex သုံးသပ်ချက်
ယခုအပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး အရောင်းအဝယ်အခွင့်အလမ်းများအား သိပြီး၊
usd gbp eur forex signals cad
24.12.2018 09:18 အပတ်စဉ် Forex သုံးသပ်ချက်
usd gbp ရေနံ federal reserve အရောင်းအဝယ် စစ်ပွဲများ trump
ပြားဂဏန်း(ဆင့်) အကောင့် မိုက်ခရို အကောင့် ပုံမှန်(စံ) အကောင့် ECN သုည spread ပြားဂဏန်း(ဆင့်) အကောင့် MT5 ပုံမှန်(စံ) အကောင့် MT5 ၁၂၃ ဒေါ်လာ Bonus အပိုဆု ၅၀$ အကျိုးတူလုပ်ငန်း